KUSHANDISA | - Xuzhou Caixin Aluminium Zvigadzirwa Co, Ltd.
Wide kushandiswa kweCaixin aluminium zvigadzirwa
Dzvanya kuti uone
Sezvo inorema-basa yekuvaka mota yeXCMG Boka, yakagara iri aruminiyamu yezvigadzirwa zvigadzirwa zvinopihwa neXuzhou Caixin Aluminium Zvigadzirwa Co, Ltd., senge aruminiyamu chiwanikwa papuratifomu, aruminiyamu chiwanikwa yakaturika tswanda, aruminiyamu chiwanikwa manera, aruminiyamu chiwanikwa guardrail, aruminiyamu alloy nhanho, nezvimwe. Alloy zvigadzirwa. Yakasiyana manejimendi manejimendi system zvitupa kuona mhando; ISO9001: 2015 mhando manejimendi manejimendi sisitimu, ISO45001: 2018 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi sisitimu, ISO14001: 2015 kwezvakatipoteredza manejimendi system setifiketi, utility modhi patent chitupa, SGS sangano fekitori chitupa, nezvimwe.
Xuzhou Caixin Aluminium Zvigadzirwa Co, Ltd. inoitisa uye inogadzira mota dzemagetsi, zvikamu zvemota, pikicha rori maturusi, nezvimwewo Iyo aruminiyamu chiwanikwa auto zvikamu zvakapihwa nekambani kune vatengi zvakarumbidzwa vese. R & D yekambani uye vagadziri vane ruzivo rwakakura rweprojekiti uye ruzivo rwehunyanzvi kupa vatengi Zvirinani dhizaini mhinduro.
Xuzhou Caixin Aluminium Zvigadzirwa Co., Ltd. inogadzira mabhokisi emhepo uye ngoro dzemhepo dzakagamuchirwa zvakanaka nevatengi. Vashandi vezvigadzirwa vane ruzivo rwebasa rakapfuma, dhizaini uye runako chitarisiko dhizaini, kuwedzeredza kweyekutenderera uye maitiro eungano, uye vanogadzira mhando dzealuminium alloy zvigadzirwa kune vatengi.
Aluminium's low density, yakasimba simba, kukwirira kuomarara uye ngura kuramba kunoita aluminium ngarava 20% kureruka kupfuura ngarava dzakavakwa nesimbi kana zvimwe alloy zvinhu. Izvi zvinogona kudzikisira huremu hwechikepe uye simba rekushandisa. Xuzhou Caixin Aluminium Zvigadzirwa Co, Ltd. inogadzira uye inotengesa aluminium alloy mahwendefa, aluminium alloy profiles uye aluminium alloy zvikamu zvezvikepe. Vatsva nevakuru vatengi vanobvumirwa kubvunza uye kurongeka.
Indasitiri yemagetsi emhepo
Aluminium alloy masisitimu ezvikamu ave achishandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana nekuda kwezvinhu zvakaita senge akanaka musimba simba uye huremu hwakareruka; Xuzhou Caixin Aluminium Zvigadzirwa Co, Ltd. inogadzira aruminiyamu chiwanikwa zvikamu zvemhepo simba indasitiri, iyo yakahwina mukubvumirana kurumbidzwa kubva kune vatengi. Iyo R&D yekambani uye vagadziri vane hupfumi hweProjekiti ruzivo uye ruzivo rwunopa vatengi vane zvirinani dhizaini mhinduro.
Nhasi, kana nyaya dzakadai sekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye chikafu chiri kuramba chichiwedzera kuve nemukurumbira, pane maitiro ari pachena ekutsiva mapallet emapurasitiki, mapallet pallets nesimbi pallets ane aluminium pallets muminda yezvikafu, zvekurapa, zvehutsanana, uye zvemakemikari maindasitiri. Xuzhou Caixin Aluminium Zvigadzirwa Co, Ltd. yanga ichitsvaga nekuvandudza aluminium kwemakore mazhinji. Unyanzvi ruzivo rwealloy pallets, ISO9001: 2015 mhando manejimendi manejimendi chitupa, ISO45001: 2018 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi system chitupa, ISO14001: 2015 enharaunda manejimendi system system chitupa, utility modhi patent chitupa, SGS fekitori fekitori chitupa, nezvimwe, kuvimbiswa kwemhando.
Iyo aluminium alloy inotonhora bhokisi rakazvimiririra rakagadzirwa naXuzhou Caixin Aluminium Zvigadzirwa Co, Ltd. inogadzirwa nealuminium mahwendefa uye aluminium profiles. Iine zvakanakira hupenyu hwakareba hwebasa, yakanaka kupisa kutapisa maitiro, uye nekukurumidza kudzora kumhanya. Inotenderwa nemabhizimusi makuru epamba uye ekunze. Yakawana mukurumbira wakanaka. Ichi chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya muhuswa hwekugadzira maindasitiri senge zvigadzirwa zvemumvura, hove dzegungwa, nyama zvigadzirwa, zvekurima uye sideline zvigadzirwa, uye nekukurumidza-chando chikafu.
Xuzhou Caixin Aluminium Zvigadzirwa Co, Ltd. inopa vatengi vane aluminium profiles uye aluminium alloy yakagadziriswa zvikamu zvakagara zvichirumbidzwa nevatengi. Vashandi vehunyanzvi havana chete ruzivo rwepurojekiti rwakakura uye ruzivo rwakarongeka, uye sanganisa makomputa-anobatsira magadzirirwo maturusi ekuona mhinduro yakanaka yezvakasiyana zvinodiwa nevashandisi, uye vanoona musanganiswa wehunhu uye hupfumi.
Iyo aluminium alloy yekudyara rack inounza seti yakazara yeEuropean tekinoroji. Tichifunga nezvekushandiswa kwepamba kwechigadzirwa ichi, kambani yedu yagadzirisa zvikuru uye hunyanzvi muhunyanzvi hwepakutanga. Iyo yose howa imba inogadzirwa nealuminium alloy profiles, iyo inosangana nematanho eizere michina yekugadzira kudzora uye yasvika kune epasi rose nhanho. ISO9001: 2015 mhando manejimendi manejimendi sisitimu, ISO45001: 2018 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi sisitimu, ISO14001: 2015 kwezvakatipoteredza manejimendi system setifiketi, utility modhi patent chitupa, SGS sangano fekitori chitupa, nezvimwe, kuvimbiswa kwemhando.
Vashandi vehunyanzvi veXuzhou Caixin Aluminium Zvigadzirwa Co, Ltd. haingove chete ine ruzivo rwepurojekiti uye ruzivo rwehurongwa, uye vanobatanidza makomputa-anobatsira dhizaini maturusi ekuona mhinduro yakanaka yezvakasiyana zvinodiwa nevashandisi kuwana kusangana kwehunhu uye hupfumi. Iyo kambani ine akasiyana manejimendi manejimendi system Certification yekuona mhando; ISO9001: 2015 mhando manejimendi manejimendi sisitimu, ISO45001: 2018 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi sisitimu, ISO14001: 2015 kwezvakatipoteredza manejimendi system setifiketi, utility modhi patent chitupa, SGS sangano fekitori chitupa, nezvimwe.